LEENCA GURMUUN BOBBA’E
Date: March 18, 2014Author: Oromedia 0 Comments
Jiituu Lammii – (Dirree Qabsoo, Zoonii Oromiyaa kibbaa)
Hanga ijji koo danda’uttan bitaa mirga koo ilaale. Mukkeen gammoojjii aduu dadhabanii baalli irraa harca’ee qoraattii qofti ittafe malee waan ijji koo irra qubattun dhabe. Hundee mukaa tokko jalatti siqeen ammas ija kootiin waa barbaaduu ittifufe. Simbirroota lamaa- sadi ta’anii takka siiquun wal waamaa, takkammoo weedduun wal faarsaa mukarraa mukkatti ce’aa jireenya uumamaa waliin waldhaansoo qaban qofatu miira abdii wayii keessa namaatti yoo uume malee sagaleen abdii tokkollee waan jiru namatti hinfakkaatu. Iccitiin manaa nabaase garuu dhugaa kana waan geeddaruuf lafa lafa onaa fakkaatu kana keessa qalbiin koo waa dhaggeeffachuu hinlakkifne.
Gammoojjii gogaa, bakkuma gurri namaa sagalee abdii dheebotu kana keessa abdii abdii caalutu jira. Abdii nam-tokkee qofa osoo hintaane, abdii saba guddaa, abdii saba roorroo ormaa hadheeffatee furmaataaf sochiitti jiruutu achi keessa jira. Otoon kanuma yaadaan buusee baasuu, “…geenyeerra!” jedhe namni karaa na qajeelchaa ture fuula gara kootti deeffachaa.
Haltokko gara isaa miil’adheen ijaafi qalbii kootiin akka qeerransa beela’ee waa adamsuu bosona fuuldura koo jiru sakkatta’uutti deebi’e. Waan ijji koo argu dhugaa ta’uu isaa mameen miiraa gammachuufi rifaasuu walkeessoo tokkoon ka’ee dhaabadhe. Namoonni lama uffata bifti akka magariisuu uffatanii, qawwee gateettirra godhatanii, muka keessaan ulluuqaa gara keenyatti yoo dhiyaatanin arge. Inni dura deemu umriin ga’eessa yoo ta’u, qawween ani kanaan dura argee hinbeekne gateettiirra buufatee nama karaa na qajeelchaa ture nagaa gaafachaa miilaan gara kootti qajeele. Inni ittaanu kaa’ima reefuu yoo ta’u mataan cibiramee gurmuu keessa ciisu waliin yoo irra galchanii ilaalan leenca dheekkame fakkaata. Akka ilmoo haadhaarraa gargar turteen fiigee dabaree dabareen lamaan isaaniittuu harka maradhe. Qalbiin koo giduutti waa hedduu yaadattee imimmaan xiiqii ija koo keessaa harca’uu jalqabnaanan ciniinnadhee gadi dhoowwachaa jara gidduu bu’ee karaa ittifufe. Kabajamoo dubbistoota barruu kanaa, kana booda yeroofis ta’u keessummaa WBO ta’uuf jirtuutii yaadaaf qalbiin dhiyaadhaa!
Yaada kana qalbiitti qabachuun akka toluuf jecha seenaa gabaabduu tokko waliin ilaalla. Kanaaf ammo madoo jiran keessaa namtokkon fildhe. Maqaan Murataadha. Haala isaarraa ka’uunan moggaaseef malee maqaan isaa akkas miti. Asumaanis ammo iccitii eeguuf dirqama qabaachuu koos hindagatiinaa. Murataan baatii muraasa dura luqqeettuu isaarra rasaasaan madaaye. Ammaa jaallan qabsoorraa waldhaansa argachaa jira. Madaan isaa fayyee yoo ejjetu qofa xinnuma miilaan gartokkotti dhiibbata. Gaaddifni keenya wal fuullee waan ta’eef warra kaan dura dafee natti madaqe. Hunduma caalammoo amala kolfee taphachuu waan qabuuf moora hunda mukuu baasa. ‘Daamaa’taphatee yoo qoofu gara kiyya dhufa. Akkaataa roorroon diinaa qabsootti isa baase, milkii duula gaafa innii madaa’ee (humna diinaa guyyaa sana rukutame, meeshaa booji’ame…) tokkoo lamaan naaf seenessa. Murataan amma waa hunda caala guyyaa guutummaatti fayyee muraasa isaatti deebi’ee hidhannoo isaa mudhiitti deeffatu abdiin eega. Kolfaaf gammachuu miira isaarraa dubbifamuun alatti sirbootaaf faaruu qabsoo afaan isaa keessaa hinbu’u.
Amma doo’annoo koos xumureera. Kan na hafe, boruuf milkii hawwee har’aaf nagaa dhaammachuudha. Isa dura garuu waanan qoodun qaba.
“…qabsoo sabaa galmaan gahuuf ilmaan Oromoo hundi bakka jiranitti waan danda’aniin hirmaachuu qabu. Waan dirreerra jiru atuu ija keen agarteetta. Oromoon human guddaa qaba. Humna kana warraaqsuun garuu hojii tokkoon tokkoon keenyaa ta’uu qaba. Gaafas warri har’a gargar qoodanii human saba kanaa laaffisuu yaalan abdii kotatu. Sabni keenya ulfinatti baha.”
Kun dhaamsa Jaal Murataa ti. Anis kana caala waanan jedhu hinqabu. Akka aadaa WBOtti dirqamaaf gaafa bobba’an “injifannoodha!” jechuun jaallan hafanitti nagaa dhaammatu. Anis “Injifannoodha!” jechaan hangan sagantaa dhibiitiin sinitti deebi’utti nagaa dhaammadha.
Previous Previous post: WBO loltoota Wayyaanee sadii ajjeese; poolisoota 11 immoo maddeesse.
Next Next post: The issue of article 3.1.5 of the program of UDJ alerms